Micnaha taatuuga cobra | Tattoo
Susana godoy | | Tattoos Xayawaan ah, Noocyada Tattoo-ka
Tattoo-yada loo yaqaan 'Cobra tattoos' ma ahan kuwo aad u badan laakiin waa kuwo soo-jireen ah oo markii si wanaagsan loo dhammeeyo ay yeeshaan qurux qurux badan. Cobras ee dhaqamo badan ayaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah masaska ugu halista badan uguna cabsida badan. Micnaha ugu caansan waa fududahay in la ogaado: khatarta, awooda, caqliga, dhalashada, bacriminta, naxariista iyo macno darada, maxaa kuu macno kuu noqon lahaa hadaad xejisato cobra?
Laakiin waxay kuxirantahay meelaha iyo waqtiga canbaareynta cobra-da waxay noqon karaan waxyaabo aad u kala duwan. Tusaale ahaan Masar hore Cobra waxay la xiriirtay adduunka geeri ka dib maxaa yeelay cobra ayaa laga helay qabriga Tutankhamun oo calaamad u ah ilaalinta xagga fircoonkii dhintay.
Sidoo kale marka cobraska lagu rinjiyeeyo darbiyada macbudka macnaheedu waa xoog iyo awood, maxaa yeelay dadka ku hoos jira awoodda cobradu weligood way cabsan doonaan.
Hindiya, Cobra muddo dheer ayaa loo tixgeliyey inuu yahay mid ka mid ah xayawaanka ugu karaamada badan waana taas sababta ay astaan ​​ugu tahay awoodda madax-bannaanida. Inaad aragto cobra oo aad ugu dhow Hindiya waxaa loo arkaa astaan ​​wanaagsan. Diinta Buddhist abeesada waxaa loo tixgeliyaa inay tahay ilaaliye.
Shaki kama geli karno in cobras ay qurux badan leeyihiin laakiin Isla mar ahaantaana waa laga baqayaa, Taasi waa sababta tattoo uu yeelan karo macno badan. Sidoo kale, waxay sidoo kale calaamad u tahay dib-u-cusboonaysiinta tan iyo markii masasku daadiyeen maqaarkooda iyo inay is cusboonaysiiyaan. Waxaa laga yaabaa in sababtaas awgeed ay sidoo kale dadka qaar u arkeen inay tahay calaamadda dhimashada iyo cusboonaysiinta nolosha.
Adigana, muxuu astaamaha cobra-ku astaan ​​u yahay? Halkan waxaa ku yaal sawirro sawirro ah si aad u aragto sida ay u qurux badan yihiin sida tattoo laakiin isla markaa sida muuqaalkooda gardarrada ahi uga dhigo inay ka baqaan xitaa inay ku jiraan maqaarka qof kale sida tattoo.
1 Noocyada tattoos cobra
1.3 Oo leh ubax
2 Xagee laga helaa tattoo cobra
2.2 Gacanta ku jira
Noocyada tattoos cobra
3D ama tattoos saddex-geesood ah waxay na siinayaan qaab ka badan kan dhabta ah. Tani waa sababta oo ah waxay noo sheegaysaa in xayawaanka la sheegayo uu u muuqdo inuu ka soo baxayo maqaarka. Isku darka hooska, taas oo siinaysa saameynta gargaarka iyo shaqada weyn ee farshaxanka tattoo ayaa sameyn doona natiijadan cajiibka ah. Sidaa darteed, astaamaha cobra ayaa sidoo kale yeelan kara faahfaahintaan ka dhigi doonta inay sii muuqdaan, xitaa haddii aad ku dhejisid gacmaha, xabadka ama lugaha. Waxay u noolaan doontaa nolosha!
Waxaan ka hadleynaa dhabta marka dhammaan dhammeystirka cobra ay leeyihiin caan. Dhexdooda, labadaba qaabkooda, midabkooda, carrabkooda ama cirbadooda ayaa lagu dari doonaa qaabeynta taas Dareen dhab ah marka la sawirayo. Dabcan, iyagu sida caadiga ah ma qaadaan hooska aan horay u soo sheegnay, haddii sidoo kale diyaaraddaas gargaarka ee dib loogu celiyay 3D. Wali dareenka dhabta ah ayaa adkaada, kaas oo ku daraya taabashada asalka iyo muujinta. Xaaladahaas oo kale, Tatoosyadu badanaa waxay leeyihiin cabir ku habboon, inta udhaxeysa dhexdhexaad ama weyn, sidaa darteed dhammaan faahfaahintaasi waxay umuuqdaan kuwo aad ufiican.
Oo leh ubax
ka Tattoo cobra oo leh ubax waxay leeyihiin macno cad oo aan ahayn fidno. Waddo dib loo jaleeco loona tixraaco Xaawa, beertii Ceeden Ibliiska qaab abeeso ah. Waxaan ku siin karnaa astaamo ah inaan ka tagno dambi la'aan si aan u qaadno tallaabo adag oo nolosha ku saabsan biseyl. Dabcan, dad badani waxay u helaan tattoo qaabkan qaab fudud quruxdiisa, iyada oo aan fiiro gaar ah la siinin astaamaheeda.
Dhinaca kale, waxaan ku siin karnaa midabka aan jecel nahay astaamaha cobra, iyadoo la siinayo wax yar oo dhab ah. Laakiin shaki la'aan mid kale, ma ilaabi karno saamaynta biyo-biyoodka taas oo sidoo kale inta badan ku jirta nashqadda noocan ah. Isku darka codadka ka dhigaya natiijada ugu dambeysa mid firfircoon.
Xagee laga helaa tattoo cobra
Mid ka mid ah shiraacyada ugu wanaagsan ayaa ah gacanta, gaar ahaan marka laga hadlayo tattooska cobra. Maaddaama ay ku mahadsan tahay jaantuskeeda, waxaan labadaba ku dhejin karnaa qaybta sare ee gacanta oo aan u oggolaanno inay hoos u sii socoto, ama aan dooranno gacanta hore. Wax walba waxay ku xirnaan doontaa cabbirka naqshadda la doortay. Qaarkood waxay doorbidaan cabir qarsoodi ah waxayna ku yaalliin aagagga istiraatiijiga ah, halka qaar kalena doorbidaan wax aad u soo jiidasho badan iyo in masku uu dhex maro maqaarka.
Gacanta ku jira
Gacanta sidoo kale laga dhaafi maayo inuu yeesho cobra agteeda. Dhinaca hal, waxaad dooran kartaa naqshad qaab jijin iyo halka madaxa lagu arko qeybta sare ee gacanta. Dabcan, dadka kale sidoo kale waxay doortaan Tattoo tattoo cobra waxayna ku ifinayaan faraha, sida siddooyin oo kale. Waxaa sidoo kale lagu arki karaa aagga curcurka waana mid ka mid ah kuwa ugu cadcad. Sida aan arki karno, dhowr ikhtiyaar oo waliba ay ku jiraan cabbirka. Maaddaama ay gacanta ku jiraan, sida caadiga ah waa naqshaddo caqli badan.
Hal wado oo loo maro ka sawiraya aagga dhabarka, nape, waxay ku jirtaa tattoo cobra. Intaa waxaa dheer, xaaladdan waxaad dooran kartaa khad madow oo waxaad ku dari kartaa faahfaahinta qaabka toorreyda ama ubaxyada, waxay kuxirantahay doorashadaada. Mar labaad, naqshadaha waxaa lagu dari karaa cabbirro la dhimay ama laga qaadi karaa kuwa waaweyn.
ka tattoos cobra ee laabta Badanaa waxay u badan yihiin baahida ragga, laakiin ma ahan kuwo aad uga dambeeya. Kuwii hore waxaa badanaa lagu arkaa cabir weyn iyo tooda, xoogaa caqli badan laakiin had iyo jeer asal ah oo si fiican u calaamadeeya astaantooda. In khad madow iyo garaacis adag oo adag, badanaa waa xulashooyinka ugu xulashada badan.
Sida qaybta gacanta, markaan ka hadlayno noocan oo kale ah tattoos laakiin lugaha, sidoo kale waxay yeelan karaan dhammaystir la mid ah. In kabadan waxkasta maxaa yeelay waxaa lagu arki karaa wado dhagax ah, sida jijin. In kasta oo naqshadaha muujiya sida masku uu kor ugu kaco lugta isagoo wata faahfaahin kale uusan aad uga fogeyn. Shaki la'aan, kala duwanaanshaha tattoo sidan oo kale ah had iyo jeer waa mid aan dhammaad lahayn.
La garabka ka qaadanaya cobra, wuxuu noqon karaa kan ugu asalka badan. Mid ka mid ah naqshadaha matalaya asalnimadan ayaa ah midka ina tusaya madaxa xuubka sida uu uga soo baxo garabka ilaa laabta. Dabcan, munaasabadaha kale waxaan ka heli karnaa fikradaha jiifka ah ee u dhexeeya garabka illaa salka qoorta. Qaybta dambe, waxay had iyo jeer la socon doonaan faahfaahin dheeraad ah sida ubaxyo.
Sawirada: Pinterest, www.voyageafield.com, www.tattoodaze.com, @ sararosacorazon.art, www.thewildtrends.com, peekinsta.com, es.tattoofilter.com, latatoueuse.com
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos Xayawaan ah » Micnaha tattoo cobra
Hello Aurora, xiriiriyehan waxaad noo soo diri kartaa sawirkaaga si aan u daabacno iyo in inta kale ee akhristayaasha ah ay u arkaan → http://www.tatuantes.com/enviar-tatuaje/
Jaangooyooyinka ayaa u kacay